बेरोजगार बनिन् दीपिका पादुकोण ! भन्सालीले ‘इन्शाअल्लाह’मा खेलाउलान् ? – Etajakhabar
बेरोजगार बनिन् दीपिका पादुकोण ! भन्सालीले ‘इन्शाअल्लाह’मा खेलाउलान् ?
काठमाडौंः केही समय यता बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अभिनेता रणवीर सिंहको विवाहको खबरले बलिउड तताएको छ । सँगै दीपिका सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म ‘इन्शाअल्लाह’मा सलमान खानसँग देखिने चर्चा समेत चलिरहेको छ ।
भन्सालीले फिल्मको स्क्रिप्टमा काम गरिरहेको र स्क्रिप्ट पूरा हुनेबित्तिकै फिल्मको स्टारकास्ट घोषणा गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । फिल्मको सुटिङ अर्को वर्ष शुरू हुन्छ । सलमानले ‘रेस ३’ को प्रमोसन गर्दाखेरी नै आफू इन्शाअल्लाहमा हुने बताएका थिए । फिल्ममा दीपिका हिरोइन हुनेछिन् ।
दीपिका र भन्साली राम्रो साथी हुन् । दुवैले केही फिल्ममा काम पनि गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा दीपिकालाई भन्सालीले नाइँ भन्न सक्दैनन् । दीपिकाले अहिलेसम्म सलमानसँग काम गरेकी छैनन् । ‘पद्मावत’पछि उनले कुनै पनि फिल्म साइन गरेकी छैनन् । एजेन्सी
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०२, २०७५ समय: १२:३५:१८